Soze Ndiyeke Ukuba LiNgqina LikaYehova | Incwadi Yonyaka Ka-2015
UAna María (Mary) Glass
IBALI LOBOMI UmKatolika oselula ozimiseleyo owafunda iBhayibhile waza wakwazi ukumelana nenkcaso yentsapho yakhe, eyeCawa nekaRhulumente.
NDANDINGUMKATOLIKA ovutha bhe! Ndandicula kwikwayara ibe ndandidla ngokukhapha abefundisi xa besiya emaphandleni kumthendeleko weMisa. Kwathi ke ngo-1955 udadewethu wandincokolela ngeParadesi ezayo. Wandinika iBhayibhile, incwadana ethi, “This Good News of the Kingdom,” kunye nencwadi ethi “UThixo Makabe Nenyaniso.” Ndakuthanda gqitha oko ndandikufunda kangangokuba ndade ndacela kumfundisi ukufunda iBhayibhile. Wandiphendula ngokuthi “ndakushiywa ziingqondo,” kodwa ndazixelela ukuba ndiza kuyifunda.
Emva kokuba ndifudukele kwamakhulu eBoca Chica, umfundisi wandibuza ukuba kutheni ndingasayi ecaweni. Ndamxelela ukuba izinto ezininzi ezifundiswa ecaweni azikho eBhayibhileni. Waba lugcwabevu ngumsindo. Wathi “Jong’ apha ntombazana, uyimvu elahlekileyo.”
Ndamphendula ndathi, “Mna ndibona ngathi nguwe olahlekileyo emhlambini kaYehova, kuba zona izimvu ayizozamntu kodwa zezikaYehova.”
Zange ndaphinda ndawubek’ umcondo wam ecaweni. Ndayokuhlala nosisi, ibe emva nje kweenyanga ezintandathu ndiyivile inyaniso, ndabhaptizwa. Ngoko nangoko, ndaba nguvulindlela othe ngxi. Emva konyaka ndatshata noEnrique Glass, owayengumveleli wesiphaluka. Ngeny’ imini sishumayela epakini eLa Romana, kwamisa amapolisa abamba uEnrique. Njengoko ehamba naye, ndaleqeka emva kwawo ndisithi: “Nam ndiliNgqina likaYehova, yaye bendishumayela. Kutheni ningandibambi nje?” Kodwa ke ayengafuni mna.
Xa kudityaniswa izihlandlo ezahlukeneyo awazithothoza ejele uEnrique, yiminyaka esixhenxe enesiqingatha. Ngesi isihlandlo wagwetywa iinyanga eziyi-20. Rhoqo ngeeCawa ndandisiya kumbona ejele. Ngenye iCawa umphathi wejele wandibuza, “Uzokwenzan’ apha?”
Ndathi, “Umyeni wam uvalelwe ngenxa yokuba eliNgqina likaYehova.”
Waphendula wathi, “Usemncinci, ininzi into onokuyenza ngobomi bakho. Kutheni uzilibazisa ngamaNgqina kaYehova?”
Ndamxelela ukuba “Nam ndiliNgqina likaYehova. Nokuba ubungandibulala kasixhenxe uphinde undivuse kasixhenxe, soze ndiyeke ukuba liNgqina likaYehova.” Ngokudikwa wandigxotha.
Emva kokuvulwa komsebenzi wokushumayela, mna noEnrique sakhonza iminyaka eliqela esiphalukeni nasesithilini. UEnrique walala ekufeni ngoMatshi 8, 2008. Ke mna ndiqhubeka nobuvulindlela obuthe ngxi.